टीका नलगाई पनि हुन्छ बिहे ?
बैकुण्ठ ढकाल ‘टीका नलाई त बेहुला अन्मिनै मिल्दैन हजुर, बरु नुहाई धुवाई गरेर तीन दिनमै टीका लगाउन सकिन्छ ।’ ‘टीका नलगाए पनि विवाह गर्न मिल्छ, हुन्छ र सकिन्छ ।’ विवाह गर्न ठिक्क परेकी स्नातकोत्तर अध्ययनरत एक चेलीलाई मैले भनेँ । उनले फेरि केटा पक्षसँग कुरा गरिछन् । अहँ, मानेनन् । टीकाटालो (इन्गेजमेन्ट) नगरी बेहुला अन्माउने चलन नै नभएको अड्डी कसे बेहुला पक्षले । अनि मैले… विस्तृत समाचार
प्रेमराज सिलवाल अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रावधान थियो । तर, त्यो कुरा लागू नभएपछि बाध्य भएर बहुमतीय प्रणालीमै फर्कनुप¥यो । सम्पूर्ण सहमति विश्वमा कतै पनि सम्भव छैन । सन् १९१९ मा गठित राष्ट्रसंघ अर्थात् लिग अफ नेसन्स असफल हुनुको प्रमुख कारण यही थियो । त्यतिबेला युद्धले युरोप ध्वस्त बनिसकेको थियो । तर, निर्णय प्रक्रियामा ‘सम्पूर्ण सदस्यको सहमति’ भन्ने वाक्यांश… विस्तृत समाचार
वैकुण्ठ ढकाल रक्सी धेरै खानु र सधँै खानु राम्रो काम होइन । स्वास्थ्य बिगार्ने, सामाजिक इज्जत र मान–प्रतिष्ठा घटाउने काम हो । तैपनि, हाम्रो समाज र परिवारमा यस्ता जँड्याहाको ठूलै हुल छ । मानिस यस्ता मानिसका विषयमा भन्ने गर्छन् । यी खाले मानिसले रक्सी खाएको हुन्न । रक्सीले यिनीहरूलाई खाएको हुन्छ । नेपालमा रक्सी खाने र खुवाउने काममा सरकारले हौसला दिने भएकाले समाजमा भलाद्मी जँड्याहाको… विस्तृत समाचार
नागरिक समाजका अगुवा, कता हरायौ ?
प्रेमराज सिल्वाल सन् १९९० को आन्दोलन क्रममा वकिल, डाक्टर, इञ्जिनियर आदि पेशागत समूहबाट प्रजातन्त्रका लागि दबाब दिइएको थियो भने सन् २००६ को राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा पेशागत एवं नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवीका तर्फबाट सडकमा आवाज उठाइएको थियो । आन्दोलनको समाप्तिसँगै नागरिक समाजमा क्रियाशील ती व्यक्ति दल विशेषमा विभाजित भए । संविधान कार्यान्वयन, सु—शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चतामा खरो उत्रन सेलाए । नागरिक समाजका अगुवा भनेका ज्ञान, सीप, दक्षता, अनुभव… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 14 15 16 17 18 Older Last ›